Indlu eyakhiwe ngamapulangwe #3 - Alfie the A-Frame - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe #3 - Alfie the A-Frame
552 okushiwo abanye
Indawo yesibili ye-Airbnb "Efunwa Kakhulu" kulo lonke elase-Canada, ikhabethe lethu elihle elisezingeni eliphezulu linokubukwa okumangalisayo kwe-Sechelt Inlet futhi lithola lonke ilanga lantambama.Ulwandle luwuhambo lwemizuzu emithathu ekwehleni, futhi umphakathi wethu uthule kakhulu njengoba uhlezi ekugcineni komgwaqo. Kungani ungezi futhi uphumule izinsuku ezimbalwa?
Ikhabethe lethu linombono omuhle weSechelt Inlet. Futhi kungokwakho ukuthi ujabulele.Iwuhlaka, futhi inesakhiwo esivuleke kakhulu ngaphakathi. Ine-loft ephezulu njengegumbi lokulala eline-balcony enamathiselwe ngaphambili.
Igumbi lokugezela likhanya kakhulu, linokukhanya kwesibhakabhaka okukhulu ukuze kungene ukukhanya, futhi linobhavu othandekayo wezinyawo zozipho ukuze ungene ngaphakathi.
Ikhabhinethi iseduze kakhulu nasekupheleni komgwaqo ehlala kuwo (amakhilomitha angu-10 ukusuka edolobheni lase-Sechelt), ngakho-ke kuncane ukuminyana kwezimoto okungaphazamisa isikhathi sakho sokuhamba.Qaphela, ungase ube nokulala okungcono kakhulu kwempilo yakho lapha.
Kukhona ama-oodles okugibela izintaba nokuhamba ngebhayisikili eduzane (I-Coast Gravity Park ingaphezu komgwaqo) kanye nenala yemicimbi namafestivali azojatshulelwa, ikakhulukazi phakathi nezinyanga zasehlobo.Ikhabhinethi yethu iyindawo ekahle yokubalekela wonke umuntu onentshisekelo yokuzwa okuhle kwe-British Columbia.
Abantu ababili bangahlaliswa ngokunethezeka kakhulu, kodwa futhi kukhona usofa wokudonsa phansi ongalala ababili ngaphezulu!
4.92 · 552 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-552
Ikhabhinethi yethu iseTuwanek eseduze kakhulu nokuphela komgwaqo ongenela enyakatho ngasempumalanga yeSechelt Inlet.Ngale kweTuwanek kuncane okunye ngaphandle kwehlane, okungenwa kulo ngendiza noma ngesikebhe kuphela. Ngenxa yalokhu, kuthule kakhulu lapha kunabantu abambalwa.
Ngezansi kwethu kukhona i-Tuwanek spit, evame ukuduma ngabatshuzi. Kukhona ulwandle lwesibili lapho uhamba ibangana nje olulungele izingane futhi kulula ukulubhukuda.Futhi kuyindawo enhle yokuhamba ngezinyawo nokuhamba ngezikebhe, futhi kuye ngesikhathi sonyaka, ungawaqasha e-Peddles and Paddles, eseduze nekhona.
Ngemuva kwethu phezulu komgwaqo wokugawulwa kwemithi kukhona i-Tetrahedron Provincial Park, enemizila eminingi ngisho nochungechunge lwamakhabhini okungahlalwa kuwo ukuze uthole uhlobo olusha kakhulu.Kutuswa ukuba nemoto emangelengele ukuze ukhuphukele lapho, futhi nakanjani amaketanga uma uzama ebusika.
Cishe imizuzu emihlanu uma ubuyela edolobheni kune-Hidden Grove enezindledlana ezinhle kakhulu, nezifinyeleleka kalula ezingajatshulelwa yibo bonke.Futhi eminye imizuzu embalwa ubheke edolobheni uzothola i-Porpoise Bay Provincial Park enolwandle oluhle, olunesihlabathi futhi kumnandi ukuyivakashela ngezinyanga zasehlobo.
Kunokuningi ongakubona nokwenza kude oGwini. Amaphuzu avelele ambalwa ahlanganisa uhambo oluhle cishe imizuzu engamashumi amane ukusuka lapha e-Smugglers Cove, ukugibela izintaba/ukugibela iqhwa ukhuphukele e-Dakota Ridge, idrayivu enhle udlula i-Madeira Park noma i-Garden Bay, kanye nebhizinisi elifinyelela ekupheleni kwe-peninsula ukuze ubone ukuma. amagagasi e-Skookumchuck Narrows!
Sivame ukushiya izihambeli zizenzele ezazo izinto. Sihlala ekhabetheni elingaphambili, futhi simema izivakashi ukuthi zingqongqoze emnyango wethu, umyalezo noma ucingo nganoma yisiphi isikhathi ngemibuzo, ukuphawula, ukukhathazeka noma iziphakamiso!
Sivame ukushiya izihambeli zizenzele ezazo izinto. Sihlala ekhabetheni elingaphambili, futhi simema izivakashi ukuthi zingqongqoze emnyango wethu, umyalezo noma ucingo nganoma yisi…